BETSIBOKA .LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Roa naratra mafy tao Tsarahonenana | Madatopinfo
BETSIBOKA .LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Roa naratra mafy tao Tsarahonenana
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ny lalam-pirenena RN4 mampitohy an’Antananarivo -Mahajanga,ny Alatsinainy 17 Febroary lasa teo. Roa no naratra mafy, fokontany Tsarahonenana kaominina ambanivohitra Andriba distrika Maevatanana ao amin’ny faritra Betsiboka.
Fiarakodia “Starex” iray,an’ny orinasa mpandefa taratasy sy entana no nivadika teo eo amin’ny PK 217+300 raha avy any Mahajanga ka handeha hanao todi-doha miverina eto an-drenivohitra. Tamin’ny roa ora latsaka fahefany maraina no nisehoan’ny loza.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny Brigade Andriba tany an-toerana dia tratran’ny “torifotsy” ilay mpamily ka tsy nandeha amin’izay laoniny intsony ny familiana nataony. Niteraka fivadian’ilay fiara izany, tsy voatazon’ilay mpamily intsony ny “familiana” ka izao naharatrana olona roa izao dia ilay mpanamory fiarakodia sy ny mpanampy azy na “aide-chauffeur”. Tsy izany ihany fa potika ilay “starex” taorian’ny fivadibadihany tany amin’ny hantsana.
Maro ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona betsaka sy nandratrana ampolony maro, tamin’iny lalam-pirenena RN4 iny. Saika fifandonana avokoa no anton’izy ireny, ity tranga niseho tany amin’ny fokontany Tsarahonenana ity kosa anefa dia vokatry ny tsy fahafehezan-tenan’ilay mpamily noho ny tsy fampian’ny torimaso. Tsara kokoa raha hamafisina ireny mpitandro filaminana manao fisavana eny amin’iny lalam-pirenena iny mba hanaitaitra ireo mpamily matetitetika.